Dusiyeen galaas glazed
60X60 Dark marmar ah
60X60 Light marmar ah
80X80 marmar ah
Dusiyeen galaas qoray
dusiyeen lagu duubay
Dusiyeen ROOGA qurxiyey
Ahama birta Jikada SAXANKA
Ahama birta XUDDUUDKA
. Tangres Industiral CO, LTD ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2010, oo ku yaalla "City Chinese Ceramic - Foshan Guangdong". Tan iyo abuuritaanka, Shirkadda ayaa shaaca ka qaaday aragtida maamulka "wada shaqaynta isku qalbi iyo ku guuleysto dunida daacadda" ayuu. Iyada oo tijaabooyin iyo dhibaatooyin, horumarineyso galay shirkadda badan oo baaxad ganacsiga shisheeye.
Wajahadda ee ganacsiga waa ay ku jiraan qayblibaaxna, iibka, iyo wakiilka for dejinta iyo dhoofinta. Waxaan sidoo kale ka shaqeeya aad ula side si aan caawin kara macaamiisha helaan xamuulka ugu wanaagsan ee badda. In dunida dhakhso-beddelo dhoobada, shirkadda si degdeg ah uu yeesho, iyo iibka alaabta ay sii kordhaysa bil kasta, iyada oo marmarka dhoobada, ahama saxanka jikada steel, xadka ahama, iyo maddiibad dhaqo, 3D leben rooga, iyo waxyaabaha sida fiican u iibiyo gudaha iyo dibadda dalka iyo guusha jacaylka iyo Ammaanta sare oo ka macaamiisheena qiimeeyo.
Sababta sababta shirkadda ka dhigi kartaa guulaha aad u fiican sida tartanka fiiqan waa in ay tayada wax soo saarka aad u fiican iyo rayn dhiiri macaamiisha, iyo adeegyada ay kaamil ah ka dib iibka guuleysan suuqa, iyo waxyaabaha wanaagsan si wadajir ah ula adeegyada wanaagsan ku guulaystay Tangres maanta. Kooxdayada leeyahay aqoon xirfadeed wanaagsan oo ka shaqeeya aad devotedly oo wax ku ool ah. shaqaalaha Business leeyihiin waayo-aragnimo ganacsi oo ajnabi ah xirfad iyo aqoon wax soo saarka. Wadayaasha mari tababar xirfadeed, iyo gaaraan heerarka Ingiriisi ku xusan by ururada muhiimka ah ee dowladda, ayna helaan Shahaadada Shahaadooyinka Specialist Warqadaha International soo saartay hay'adaha muhiimka ah ee dawladda.
Tangres , jawaab deg deg duwanaansho suuqa si uu u hoggaamiyo arrimuhu! Hagaajinta si joogto ah si ay u gaadhaan si kaamil ah! Isku dayga ugu fiican si ay u qanciso macaamiisha our in ixtiraam kasta!
NO.15-16, B Building, Shiwan sanitary Center, Degmada Chanchen, Foshan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha